Yiba I-AOI-Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
I-AOI yinkqubo ye-QC ebaluleke kakhulu yokujonga umgangatho wokuthengisela i-SMT.
I-Fumax inolawulo olungqongqo kwi-AOI.ZONKE iibhodi ze-100% zihlolwe ngumatshini we-AOI kumgca we-Fumax SMT.
I-AOI, enegama elipheleleyo le-Automated Optical Inspection, sisixhobo esisisebenzisayo ukufumanisa iibhodi zeesekethe esizinika abathengi abakumgangatho ophezulu.
Njengobuchwephesha obutsha bokuvavanya obuvelayo, i-AOI ibona ubukhulu becala iziphene eziqhelekileyo ekudibaneni nazo ekuthengiseni nasekuxhonyweni ngokusekwe kwisantya esiphezulu kunye nobuchwephesha obuchanekileyo bokubonwa kokubonwayo.Umsebenzi womatshini kukuskena i-PCB ngokuzenzekelayo ngekhamera, ukuqokelela imifanekiso kwaye uthelekise neeparamitha kwiziko ledatha.Emva kokulungiswa komfanekiso, iya kuphawula iziphene zikhangelwe kwaye zibonise kwimonitha yokulungiswa kwezandla.
Yintoni eza kubhaqwa?
1. Isetyenziswa nini i-AOI?
Ukusetyenziswa kwangethuba kwe-AOI kunokunqanda ukuthumela iibhodi ezimbi kumanqanaba alandelayo endibano, ukufikelela kulawulo lwenkqubo elungileyo.Okunciphisa iindleko zokulungisa, kwaye ugweme ukukrazula iibhodi zesekethe ezingalungisekiyo.
Ukubeka i-AOI njengenyathelo lokugqibela, sinokuzifumana zonke iimpazamo zendibano ezifana nokuprintwa kwe-solder paste, ukubekwa kwecandelo, kunye neenkqubo zokuphinda ziqhutyelwe, ukubonelela ngezinga eliphezulu lokhuseleko.
2. Yintoni eza kubhaqwa?
Kukho imilinganiselo emithathu ikakhulu:
Imonitha iya kuxelela abasebenzi besondlo ukuba ibhodi ichanekile kwaye imakishe apho kufuneka ilungiswe.
3. Kutheni sikhetha i-AOI?
Xa kuthelekiswa nohlolo olubonakalayo, i-AOI iphucula ukubonwa kwempazamo, ngakumbi kwezo PCB zintsokothileyo kunye nemiqulu emikhulu yemveliso.
(1) Indawo echanekileyo: Incinci njenge-01005.
(2) Iindleko eziphantsi: Ukuphucula izinga lokupasa kwe-PCB.
(3) Izinto zokuhlola ezininzi: Kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwisekethe emfutshane, isekethe eyaphukileyo, i-solder engonelanga, njl.
(4) Ukukhanya okucwangcisiweyo: Yandisa ukucutheka komfanekiso.
(5) Isoftware enenethiwekhi: Ukuqokelelwa kwedatha kunye nokufunyanwa ngokubhaliweyo, umfanekiso, isiseko sedatha okanye indibaniselwano yeefomathi ezininzi.
(6) Ingxelo esebenzayo: Njengereferensi yohlengahlengiso lweparamitha ngaphambi kokwenziwa okanye indibano elandelayo.
4. Umahluko phakathi kwe-ICT kunye ne-AOI?
(1) I-ICT ixhomekeke kwiimpawu zombane zamacandelo e-elektroniki esekethe ukujonga.Iimpawu zomzimba zamacandelo e-elektroniki kunye nebhodi yesekethe zichongiwe ngowona mzuzu wangoku, i-voltage, kunye ne-waveform frequency.
(2) I-AOI sisixhobo esifumanisa iziphene eziqhelekileyo ezifunyenwe kwimveliso ye-soldering esekelwe kumgaqo obonakalayo.Imbonakalo yemizobo yamacandelo ebhodi yesekethe ihlolwe nge-optically.Isiphaluka esifutshane siyagwetywa.
5. Umthamo: Iiseti ezi-3
Ukushwankathela, i-AOI inokukhangela umgangatho weebhodi eziphuma ekupheleni komgca wemveliso.Idlala indima esebenzayo nechanekileyo ekuhloleni amacandelo e-elektroniki kunye ne-PCB ukuqinisekisa ukuba iimveliso zikumgangatho ophezulu ngaphandle kokuchaphazela umgca wemveliso kunye nokusilela kokuvelisa i-PCB.
IFlex PC IPcb Fabrication kunye neNdibano Odm PCba Ibhodi yeSekethe eprintiweyo IRigidFlex Pcb IPcb enamacala amabini